ရန်ကုန်တိုင်း၌ အနှိပ်ခန်းများ တရားဝင် ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိဟု ဝန်ကြီးပြောကြား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် အနှိပ်ခန်းများအား လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဖြင့် တရားဝင် ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိဟု တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးမြင့်သောင်းက ယနေ့ပြောကြားသည်။
ရိုက်တာအမှုတွင် ဒုရဲမှူး မိုးရန်နိုင်အား သက်သေအဖြစ် ဆက်လက် စစ်ဆေးသွားမည်
ရိုက်တာသတင်းသမားနှစ်ဦးအား ရဲတပ်ဖွဲ့က ထောင်ချောက်ဆင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်ဟု ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည့် ဒုရဲမှူး မိုးရန်နိုင်အား မယုံကြည်ထိုက်သော သက်သေအဖြစ် တရားလိုဘက်က လျှောက်ထားမှုကို တရားရုံးက ယနေ့ ပယ်ချလိုက်သည်။
လုပ်ငန်းသစ်များ တိုးတက်မှုအရှိန် ကူညီမြှင့်တင်ရေး
အသေးစား စက်မှုလုပ်ငန်းသစ်များကို ပျိုးထောင်ပေးသူနှင့် အရှိန်အဟုန် တိုးမြှင့်ပေးသူ အများအပြားသည် လူသစ်များ ဝင်ရန်ခက်ခဲသော ဈေးကွက်များသို့ အလားအလာရှိသော စွန့်ဦးတီထွင်သူများ ဝင်ရောက်နိုင်ရန် အားပေးလျက်ရှိသည်။
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းအတွက် တရုတ်ကုမ္ပဏီက မြေပြင် လေ့လာဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်မည်
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းအတွက် မြေပြင်လေ့လာဆန်းစစ်မှုများကို တရုတ်နိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ “မြို့သစ်စီမံကိန်းကို မြေပြင်အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေကို ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာဆန်းစစ်မှုကို မြန်မာဘက်ကနေပြီးတော့ New Yangon Development ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ တာဝန်ယူပြီး C လေးလုံးကုမ္ပဏီနဲ့ မြေပြင်ကို လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေ.
ရှစ်တန်းကျောင်းသားအား ဘုန်းကြီးက ရိုက်နှက်မှုကို ရဲတပ်ဖွဲ့က သာသနာရေးနှင့် သံဃနာယကသို့ တင်ပြထား
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ဧပြီ ၂၁ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဋ္ဌမတန်းကျောင်းသားအား ဘုန်ကြီးတစ်ပါးက ပြင်းထန်စွာ ရိုက်နှက်မှုအတွက် မိဘဖြစ်သူများမှ အမှုဖွင့် တိုင်ကြားထားသော်လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့က သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ထံ စာတင်ထားကာ အကြောင်းပြန်ကြားမှုအား စောင့်ဆိုင်းနေရဆဲဖြစ်၍ သံသယရှိသူအား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘီယာထုတ်လုပ်မှုကို ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးမြှင့်သွားမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ဘီယာချက်လုပ်ငန်းဖြစ်သည့် Myanmar Brewery ကို လုပ်ကိုင်နေသည့် Kirin က ပြောကြားသည်။ မြန်မာဘီယာကဲ့သို့ အမှတ်တံဆိပ်များကို ပိုင်ဆိုင်သည့် Myanmar Brewery ၏ ရှယ်ယာအများစုကို တိုကျိုအခြေစိုက် Kirin Holdings.
တပ်မတော်၏ သမိုင်းကြောင်း၌ လိင်အကြမ်းဖက်မှုများ မရှိဟု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ပြောကြား
တပ်မတော်အပေါ် စွပ်စွဲထားသည့် လိင်အကြမ်းဖက်မှုများကို တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ငြင်းဆိုလိုက်ပြီး တပ်မတော်၏ သမိုင်းကြောင်း၌ ထိုကဲ့သို့ လိင်အကြမ်းဖက်များ မရှိဟု ပြောကြားသည်။